Inona ny VPN ary ny fomba anampiany anao any am-piasana | Famoronana an-tserasera
NordVPN dia iray amin'ireo serivisy ekena indrindra rehefa tonga eo ambany fiahian'ny amin'ny tamba-jotra izay mijanona ho tsy miankina tanteraka ny angon-drakitra raha tsy afaka "snoop" ny mpandraharaha na ny masoivohon'ny governemanta raha mila izany izy ireo. Androany, ireo karazana tambajotra VPN ireo dia fironana hitazomana ny tsiambaratelo sy ny angon-tsika azo antoka tanteraka ary tsy hitan'ny mason'ny hafa.
Izany no antony hampisehoana aminao ny sasany amin'ireo mampiavaka an'ity tambajotra VPN ity, ny vidiny ary ny sasany amin'ireo mety indrindra mety ho heriny esory isam-paritra ny atiny rehetra ananan'i Netflix Manerantany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ho afaka "mody" ianao hoe any amin'ny firenena rehetra ianao ka hamela anao malalaka i Netflix amin'ny atiny atolotra ao amin'io faritra io ihany. Ataovy.
1 Inona no atao hoe tamba-jotra VPN?
2 Ohatra lafo vidy amin'ny filàna VPN
4 Fampiasana bebe kokoa amin'ny tamba-jotra VPN
5 NordVPN, iray amin'ireo tambajotra tsara indrindra
6 Ny antony ahazoana NordVPN
7 Fiarovana amin'ny NordVPN
8 Farany: fiainana manokana
Inona no atao hoe tamba-jotra VPN?
Inona no atao hoe VPN dia fanontaniana apetraky ny maro amin'ny tenany raha vao henony ny fanafohezana voalohany. Ny VPN, na Virtual Private Net, dia tambajotra tsy miankina virtoaly izay mamela antsika hamorona fifandraisana azo antoka amin'ny tambajotra hafa amin'ny Internet. Tambajotra VPN ampiasaina ankehitriny hiditra amin'ny tranonkala voafetra araky ny faritra, hametrahana ampinga tsara amin'ny hetsika fitetezanao ireo izay maniry ny ho vahiny amin'ny tambajotram-bahoaka sy ny andiana safidy hafa toy ny fahasambaran'i Netflix.
Ny zavatra mahaliana ankehitriny dia ny tambajotra VPN noforonina mba hampifandray tsara ireo orinasa sy ny tontolon'ny matihanina, na dia ampiasaina amin'ny andiany fampiasana hafa aza izy ireo araka ny voalaza etsy ambony. Io no tokony hamoahana vokatra iray, avoakanao amin'ny tanjona iray, fa avy eo ny hafa mahalala ny fomba hanararaotana azy amin'ny fomba hafa.
Andao lazaina fa ny VPN dia mamindra ny fivezivezenao amin'ny tambajotra iray, ary ao amin'io tamba-jotra io no ahazoana tombony, toy ny fidirana atiny voafetra isam-paritra na mihoatra ny rindrina naorin'ny governemanta ho sivana Amin'ny Internet. Raha ny marina dia manolotra fanohanana an'ity karazana tambajotra ity ny rafitra miasa rehetra, ka tsy zavatra "pirate" na "hafahafa" izany. Ary ny fampiasana azy dia mihoatra ny atolotray, indrindra raha zatra mifandray amin'ny tambajotra ho an'ny daholobe izay voafetra ny filaminana ary mora kokoa ny miditra amin'ny angon-drakitra.
Ohatra lafo vidy amin'ny filàna VPN
Mba hahatakarantsika azy mora kokoa, VPN mampifandray ny finday, PC na takelaka amintsika amin'ny solosaina hafa, izay ampiasaina ho mpizara, amin'ny tranonkala rehetra amin'ny Internet, ary izay mampiasa azy hivezivezy amin'ny alàlan'ny fifandraisany.
Ka raha any amin'ny firenen-kafa io mpizara na solosaina io dia toa mifandray avy any amin'io faritra io no misy ny fifandraisantsika fa tsy tena misy antsika. Izany dia afaka miditra amin'ny karazana zavatra hafa izay avy amin'ny antsika isika tena tsy azo atao mihitsy ny firenena. Ireto misy tranga sasany izay mety mora ampiasaina ny tamba-jotra VPN:
Ferana ny famerana jeografika amin'ny tranokala na serivisy streaming na audio toa ny lazain'i Netflix
Milalaova atiny multimedia avy amin'ny serivisy toa an'i Hulu na Netflix
Una fomba tsara hiarovan-tena amin'ny tambajotram-bahoaka izay ahitanao ny angon-drakitra fizahanay
Una fomba tsara hijanonana tsy fantatra anarana amin'ny Internet rehefa heverina fa mifandray amin'ny firenena hafa
Rehefa misintona riaka isika mamela antsika hijanona ho tsy fantatra anarana
Raha mila PVN ianao, kitiho eto ary ataovy fifanarahana NordVPN amin'ny vidiny tsara indrindra
Rehefa mifandray ny solosaina na ny finday VPN dia mihetsika toy izany izy toy ny hoe teo amin'ny tambajotra teo an-toerana ihany ianao tahaka ny VPN. Ny angona rehetra avy amin'ny tamba-jotra dia alefa amin'ny alàlan'ny fifandraisana azo antoka amin'ny VPN. Rehefa mihetsika toy ny VPN ny solo-sainao, dia azo atao daholo ny loharanon-karena ananantsika amin'izy ireo amin'izay tadiavintsika ary azontsika atao ny manamboatra azy.
Izany no antony iverenantsika amin'ilay zavatra nolazaintsika teo aloha: azonao atao ny mampiasa Internet toy ny hoe tany amin'ny toerana hafa ianao an'ny planeta ity. Izany hoe, rehefa mifandray amin'ny Internet ny tranokalanao, dia mifandray amin'ny tranokala ny solosainao amin'ny alàlan'ny fifandraisana voaaro.
Raha ny lojika, raha mifandray amin'ny tamba-jotra VPN any Etazonia isika, dia afaka miditra amin'ny atiny Netflix toy ny hoe teo isika; Ny hany zavatra tokana ahafahan'ny tamba-jotra VPN eto amin'ity firenena ity manana fetrany raha ny amin'ny fiarovana ny angona satria miankina amin'ny lalàna momba ny fiainana manokana any Etazonia. Noho izany Ny tambajotra VPN izay any amin'ny firenena toa an'i Panama dia matetika ampiasaina, fialofana ho an'ny fiainana manokana. Noho izany dia miaraka amin'ny NordVPN isika ary manana ny foibeny ao amin'io firenena io.
Fampiasana bebe kokoa amin'ny tamba-jotra VPN
Midira amin'ny tamba-jotra Windows eo an-toerana na avy aiza na aiza: misy tamba-jotra VPN ahafahantsika manamboatra ny fidirana amin'ny tambajotranay eo an-toerana hahazoana ny rakitra ananantsika ao an-trano.
Midira amin'ny tamba-jotra amin'ny fandraharahana: toy ny ahafahantsika miditra amin'ny tambajotra eo an-toerana ao an-tranontsika ihany koa, dia afaka miditra amin'ny tambajotran'asa misy antsika koa isika. Fitaovana rehetra.
Afeno ny hetsika fizahana amin'ny tambajotram-bahoaka: rehefa mampiasa fifandraisana WiFi ampahibemaso dia hitan'ny rehetra ny hetsika fizahana amin'ny tranokala tsy HTTPS raha fantatr'izy ireo ny "fomba fijery". Miaraka amin'ny VPN dia tsy manadino tanteraka an'ireo izay te hijery isika.
Midira amin'ny tranokala voasakana geo
Fanesorana sivana Internet: tsy ny firenena rehetra no manana fahalalahana mitovy ary amin'ny sasany dia manana ny sivan'izy ireo izy, ka VPN mamela antsika hihoatra ireo rindrina ireo
Sintomy ireo rakitra fisandratana- Betsaka ny mampiasa tambajotra VPN mba hisintomana ireo rakitra torrent, indrindra raha voaro izy ireo.
NordVPN, iray amin'ireo tambajotra tsara indrindra
Ary raha ny marina, izany NordVPN dia manana ny foibeny ao Panama Io dia hahafahantsika manohy mankafy ny atiny Netflix tsy misy fetra. Raha atao teny hafa, afaka mamerina azy io isika toa ny tany Etazonia.
Raha ny marina dia efa natao ny fitsapana izay manaporofo izany mampiasa ireo mpizara 133 ananan'ny NordVPN, ao anatin'izany ireo any Etazonia, ary ny hafainganana mihoatra ny VPN dia mety amin'ny famerenana miverina ary tsy misy lag na fihemorana amin'ny playback.
Rehefa miresaka izahay fa afaka mifandray amin'ireo mpizara ireo dia lazainay fa hampiasa tambajotra iray ao amin'io toerana io ianao. Tahaka ny ahafahantsika mampiasa ireo isan-karazany ananany ho an'ny firenena samihafa. Eny tokoa mampiasa toerana hafa izahay hijerena ny Netflix ho hitantsika ny atiny manokana natomboky ny sehatra atiny an-tserasera amin'ireo faritra ireo.
Ary raha miresaka momba izany isika fa afaka milalao Netflix, dia hanao toy izany koa amin'ny maro hafa toy ny BBC iPlayer, HULU, ESPN, Amazon Prime Video, HBG GO sy ny maro hafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hanana fahaizana miditra amin'ny atiny natao manokana ho an'ny karazana sehatra rehetra isika ary tsy misy fameperana. Toy ny hoe mamafa ny fetra rehetra misy isika ankehitriny amin'ny Internet ary imbetsaka tsy fantatsika akory izany.
Contract NordVPN amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny fipihana eto
Ny antony ahazoana NordVPN
Jereo, misy karazana tambajotra VPN tsara harahina mba hahazoany tombony. Ataovy ao an-tsaina fa miankina amin'ny toerana misy azy ireo geolocated mifototra amin'ny lalàn'ireo firenena ireo, noho izany dia mila mijery tsara an'io lafiny io ianao satria angamba ny data-ntsika dia tsy arovan'ny lalàn'ireo firenena ireo.
Mifantoka amin'ny NordVPN izahay, ka ireto ny sasany amin'ireo tanjany tsara indrindra:
Hampidina riaka: miaraka amina mpizara mihoatra ny 5390 nohatsaraina ho an'ny P2P dia azo lazaina fa io no iray amin'ireo tsara indrindra amin'ity lafiny ity hankafizanao ny fantsom-pifandraisana tsy voafetra, ary ny fandefasana sy fandraisana ireo rakitra tsy misy fetra. Izy io koa dia miasa amin'ireo mpanjifa falehan-driaka tsara indrindra toa ny uTorrent, BitTorrent, ary Vuze. Izany hoe, raha maniry hafainganam-pandeha tsara kokoa noho ny ananantsika isika dia ho afaka mankafy misintona riaka toy ny taloha.
Quick Connect- Ity fiasa NordVPN ity dia ahafahantsika mampiasa ny mpizara miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo indrindra. Mazava ho azy, ny firenena toa an'i Etazonia na Angletera, na dia eto amintsika aza any Espana dia manana fametrahana optika fibre lehibe isika, izy ireo no tena atolotra indrindra. Mazava ho azy, Quick Connect dia misafidy ho azy ny mpizara izay mampiasa ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana tsara indrindra. Ka tsy manapa-kevitra ny hifanakalo eo anelanelan'ny iray isika.
Haingam-pandeha isaky ny toerana: Tokony holazaina fa amin'ny fananana mpizara VPN be dia be izay ahafahantsika mifandray, NordVPN dia mamela tombony sasany toy ny fidirana amin'ny firenena izay ahitan'ny upload aza ny antsika; Izy io dia mora ampiasaina mba hahafahanao manome isa amin'ny vondrom-piarahamonina falehan-driaka izay mila manana isan-jato avo kokoa amin'ny fampidinana data noho ny fisintomana.
Ho fiarovana dia hiresaka momba ny mampiavaka azy isika ao amin'ny faritra misy azy
Fiarovana amin'ny NordVPN
Araka ny efa nolazainay, dia tsy maintsy jerentsika amin'ny antsipiriany ny filaminana sy ny fiainana manokana atolotry ny tamba-jotra VPN. Amin'ity tranga ity, NordVPN dia mifanaraka tanteraka ary iray amin'ireo tanjany. Mampiasà enkripsi 256-bit AES hanafina ny angon-drakitra misy anay ary izay anisan'ny iray amin'ireo protokol azo antoka indrindra ankehitriny.
Ity encryption AES 256-bit data ity dia miaraka Lakile DH 2048-bit, fanamarinana SHA2-384 ary tsiambaratelo Mandrosoa. Andeha holazaina fa ny NordVPN dia mitandrina amin'ny fanaraha-maso raha toa ka nahomby tamin'ny mpizara marina ireo fonosana angona. Raha ny momba ny Forward Secrecy, dia protokol iray izay mikarakara ny manome anao "lakile" vaovao isaky ny miditra ao amin'ny NordVPN ianao. Mba hahafantarana anay dia toy ny isaky ny mampifandray mpampiasa vaovao ianao.
Mikasika ireo kavina NordVPN, tompon'andraikitra amin'ny fampiasana OpenVPN UDP / TCP sy IKEv2 / IPSec. Ny voalohany dia ny protokol azo antoka indrindra ankehitriny.
Endri-javatra manan-danja hafa amin'ny NordVPN dia ny Kill Switch, hanakanana ny fifamoivoizana rehefa mandao ny fitaovanao raha hitany fa misy ifandraisany na tapaka ny fifandraisana; Mizara Tunneling, rehefa mampiasa ny extension amin'ny Chrome na Firefox fotsiny ny fifamoivoizana amin'ny fivezivezena dia hohafinafina hamela fampiharana hafa mety hahaliana antsika hampiasa azy ireo, toy ny fampiharana banky na YouTube tenany; Fitsapana ny fanitsakitsahana sy fiarovana ny famoahana, ary izany dia tompon'andraikitra amin'ny fisorohana ny fampahalalana ny IP sy DNS antsika ary azon'ny mpijirika ampiasaina rehetra; Ary tsy misy ny tsy fahampian'ny fanohanana ny Tor, fanaraha-maso ny fiarovana, enkripsi roa, Nordlocker, sy maro hafa.
Farany: fiainana manokana
Vita amin'ny NordVPN sy ny toerana misy azy isika. dia voasoratra anarana any Panama, ary midika izany fa tsy ambanin'ny lalàna izay afaka manafika ny angon-drakitra fizahan-tanan'ny mpampiasa. Tena zava-dehibe io lafiny io, satria any amin'ny firenena hafa, ankoatry ny fanilikilihana sasantsasany, dia azo hamarinina ny angon-drakitra.
Izany rehetra izany dia nanampy an'izay voalaza rehetra habetsaky ny safidy miampy ny fanitarana amin'ny browser, ny mifanentana amin'ny système d'exploitation, ny Android sy ny iOS apps, mihoatra ny 5390 mpizara, toerana 62 ary ny vidiny 10,64 € isam-bolana napetrany tamina toerana tsara ianao. Na dia amin'ny vidiny aza, raha manakarama roa taona isika, dia milatsaka hatramin'ny 3,11 euro isam-bolana, noho izany dia miresaka momba ny € 74,64 hivezivezy soa aman-tsara miaraka amin'ny tombony rehetra voalaza.
Una Tambajotra VPN mamela antsika hanana tombony maromaro ary azo antoka fa afaka manararaotra ny fampahalalana rehetra omena avy amin'ireo tsipika ireo ao amin'ny Creativos Online.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Inona no atao hoe VPN ary ahoana no anampiany anao any am-piasana
Ao amin'ny biraoko, manomboka amin'ny fotoana iasantsika an-trano dia manandrana mitady vahaolana izahay hahazoana ny antontan-taratasinay rehetra. Hitanay ny NordVPN ary io no vahaolana tamin'izany rehetra izany. Tamin'ny voalohany dia nieritreritra izahay fa ho an'ny tranainy indrindra amin'ny orinasa dia hisy olana izany, saingy tsotra ilay fampiharana. Io sy ny mpahay siansa amin'ny informatika dia eo foana manazava ny fomba fiasan'ny zava-drehetra.